ISONO SASEKUQALENI: YINTONI? KUTHENI IKHO? KUNYE OKUNINZI
Kule posi intle siza kukuxelela malunga Isono santlandloloApha uya kulazi ukuba lithetha ukuthini eli gama linzima elijikeleze umntu ukusukela ekudalweni kwakhe nguThixo weNkosi yethu.
1 Yintoni isono sokuqala?
2 Kutheni isono sikho nje?
2.1 Ngaba isono santlandlolo sibonwa njengesigwebo?
2.2 Kutheni sonke sibandakanyeka kwisono sika-Adam?
2.3 Sisuswa njani isono santlandlolo?
2.4 UThixo uyaqhubeka ukuthanda umntu, nangona wonile
2.5 Ungayeka njani ukona?
3 Iziphumo zesono santlandlolo
Isono santlandlolo sivela kukungathobeli kuka-Adam ngokutya "kumthi wokwazi, wokulungileyo nokubi" okhokelele kwiziphumo kubukho bomntu.
Ke, inokucaciswa njenge isono sokuqala, kwityala abanalo bonke abantu phambi koThixo njengemveliso ka-Adam yokona kwiparadesi yase-Eden.
Imfundiso yesono santlandlolo, ikhokelela kwiziphumo zobukho bomntu kunye nolwalamano lwakhe noThixo, kwanangaphambi kokuba abantu babe badala ngokwaneleyo ukuba benze izono ngenxa yesazela.
Kungangqinwa kwizibhalo ezingcwele kumaRoma 3:23, malunga neziphumo ezibi zokungathobeli kokuqala kwicala lomntu, okubangela ukuba uAdam noEva bashiywe kwangoko ngaphandle kobabalo lobungcwele bobungcwele.
Umtshato owawulawula eparadesi, ngenxa Ubulungisa eyokuqala eyabakho xa uThixo wadala indoda yaphanziswa, kukunyanzelwa ziziphumo zokomoya zomphefumlo emzimbeni xa uqhekekile, umanyano lwendoda nomfazi luthotyelwe kwimpixano kwaye, ubudlelwane babo buvaliwe phantsi komnqweno nomnqweno. thambeka.
Kwizibhalo ezingcwele kubonakala ukuba isono sokuqala sangena ngaphakathi el mundo, kanye isibini sokuqala uAdam noEva, ababenziwe nguThixo, benza isenzo sokungathobeli, xa babephenjelelwa yinyoka emntw a umtyholi, batya kumthi wokwazi, wokulungileyo nokubi, okhokele ukuze aba bagxothwe eMyezweni wase-Eden, kwaye thina, abantwana babo, singathathwa njengaboni kwangaphambi kokwenza eso senzo.
Kutheni isono sikho nje?
Kungangqinwa yimibhalo engcwele kwiGenesis 3:11, yokuba umntu wahendwa ngumtyholi, wavumela ukuthembela kuThixo ukuba kutshabalale entliziyweni yakhe, wayisebenzisa kakubi inkululeko, engawuthobeli umthetho kaThixo weNkosi yethu, ukusuka apha yachaza njengesono sokuqala somntu.
Ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili, sonke isono siya kuthathwa njengokungathobeli phambi koThixo, kunye nokungabikho kokuzithemba ngokulunga kwakhe.
UThixo uSomandla, wadala umntu ngokomfanekiselo wakhe nangokufana naye, wammisa ngobabalo lwakhe umntu yinto yokomoya engenakubakho ngaphandle kobabalo kunye nenkululeko ngaphambi kokungeniswa kukaThixo. Yonke inxalenye yomgaqo womthi wolwazi, wokulungileyo nokubi, ofuzisela umda ongenakoyiswa wokuba, umntu sisidalwa ekufuneka sisebenze ngokukhululekileyo, kodwa ngaphezulu kwayo yonke ngentlonipho nokuzithemba.
Ngaba isono santlandlolo sibonwa njengesigwebo?
Njengoko kuchaziwe ngumpostile uPaul Paul apho ubungqina kumaRoma 5:19, kuchazwa ukuba:
"Ngokungathobeli komntu omnye", bonke benziwa aboni.
Ngelixa kumaRoma 5:12 kunokubonwa ukuba:
Njengokuba isono sangena ngamntu mnye ehlabathini, kwangena ke isono ukufa kwaza ngokunjalo ukufa kwabatyhutyha abantu bonke, ekubeni bonke bonayo… ”.
Ukuqhubeka, kunye nento ebonakaliswe ngumpostile uPaul Paul, ujongana nosindiso jikelele kuKristu, njengoko kubonisiwe kumaRoma 5:18:
"Njengolwaphulo-mthetho oluthandwa lodwa ebantwini bonke, ukugwetywa, ngokunjalo nomsebenzi wobulungisa omnye, uKrestu, ubonelela bonke ukuzithethelela okunika ubomi."
Ukuqhubekeka noPaul Paul, sinayo into yokuba iCawe kwasekuqalekeni kwayo ibonakalisile ukuba indlala enkulu egubungele abantu, kungenxa yokuba bayaphambuka kwaye bakhethe umendo wobubi njengesono, nasekufeni, ngaphezulu koko, abaluhoyi unxibelelwano lwabo nesono esenziwa nguAdam, kunye nesiganeko esidlulisela isono apho bonke abantu bazalwa ngayo kwaye babandezeleka "kukufa komphefumlo".
Kutheni sonke sibandakanyeka kwisono sika-Adam?
Ngokuqinisekileyo bonke abantu bayabandakanyeka kwisono sika-Adam, njengokuba bonke babandakanyeka kubulungisa bukaKristu. Kodwa, ukuhanjiswa kwesono santlandlolo kuyimfihlakalo engenakucaciswa ngokupheleleyo.
Nangona kunjalo, ukuba kuyaziwa ngesiTyhilelo ukuba uAdam wayenobabalo lokufumana ubungcwele bobulungisa kunye nokusesikweni, kungekuphela nje ukuba wayelufanelekile ubabalo olungasentla olukhankanyiweyo, kodwa nako konke ukubakho komntu, xa wanikezela kumhendi, UAdam noEva bawela esonweni sabo, kodwa isono esenziweyo senzakalisa lonke uluntu.
Sisono esigqithiselwa ngokwandiswa ngokupheleleyo eluntwini, nto leyo ethetha ukuba ngenxa yobukho bomntu kuthintelwe ubungcwele kunye nomthetho wokuqala. Ngesi sizathu, isono santlandlolo sibizwa ngokuba "sisono" ngendlela efanayo: sisono "esenziwe isivumelwano", "asenziwanga" sisimo kwaye ayisosenzo.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Thetha umthandazo ngoku wokuxolelwa.
Sisuswa njani isono santlandlolo?
Ngenjongo yokuphelisa isono santlandlolo, kufezekiswa kwakuba kwenziwe uvumo lokuqala lokholo, oko kukuthi, xa umthendeleko wobhaptizo, enesenzo sokucoca umphefumlo, uxolelwe kwaye uhlanjululwe, kwaye akukho nto ishiyekileyo ukuba isuswe, nokuba kungenxa yempazamo yoqobo, okanye nayiphi na into eyenziweyo okanye, ukusilela oko, ishiye ukuthanda kwayo.
Isenzo somthendeleko wobhaptizo siyamkhulula umntu kubo bonke ubuthathaka bobukho, nangona kunjalo, kushiyekile ukuba aba balwe nezenzo zokungakhathali zokuhamba kwindlela yabakhohlakeleyo, ebeka ubukho babakhohlakeleyo. ibandla.
UThixo uyaqhubeka ukuthanda umntu, nangona wonile
Njengoko kungqinwa kwiGenesis 3: 9, emva kokuwa, umntu akazange ashiywe luthando lukaThixo, ngokuchaseneyo, uMdali uyambiza kwaye amlumkise ukuba enze ubukrelekrele kuloyiso oluzakube luphezu kwakhe. ububi, nokuphakanyiswa kokuwa kwakhe phambi kwesono esenziwe nguAdam noEva.
Kuyangqinwa kwiGenesis 3:15 ukuba indoda yabizwa ngokuba yi "Protoevangelium", njengoko isisilumkiso sokuqala sikaThixo uSomandla, esisilumkiso somlo ozakwenzeka phakathi kwenyoka nomfazi, ocinga ukuba uloyiso ekugqibeleni inzala yalo.
Ungayeka njani ukona?
UMoya oyiNgcwele unesipho sokwenza umntu aqonde, phakathi kovavanyo oluya kumkhokelela ekukhuleni kobuntu bakhe, ngokomyalelo wokuziphatha okuhle, kunye nesilingo esiya kumkhokelela esonweni nasekufeni.
Ngokunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba unokuhendwa nini ngobubi kwaye uvume isenzo sokuwela kwisilingo sesono. Inyani yokuqonda isusa imaski kubuxoki besilingo; izenza ngathi "intle, iyathandeka emehlweni, kwaye inqweneleka", kodwa inyani kukuba ikhokelela ekufeni.
Isenzo sokuvuma kunye nokuzivumela ukuba uhendwe sisilingo kubandakanya isigqibo sentliziyo, njengoko kubonakala kuMateyu 6: 21-24:
"Akukho mntu unokukhonza iinkosi ezimbini, ukuba siphila ngokoMoya, senza ngokoMoya."
UThixo uBawo waseZulwini nguye osinika amandla ukuze sizivumele ukuba sihanjiswe nguMoya oyiNgcwele, njengoko kuchaziwe kumaKorinte 10:13:
“Awungenanga nesilingo esikhulu kunesomntu. UThixo uthembekile ukuba akazukuvumela ukuba ulingwe ngamandla akho. Ngesilingo uya kusinika indlela yokumelana ngempumelelo ”.
Iziphumo zesono santlandlolo
Ngokwenkolelo yecawa yamaKatolika, ibonisa iziphumo ezithile zesono sokuqala, ezinje:
Umhlaba uphulukene neemeko ezikhoyo kwimeko yeparadesi yantlandlolo.
UAdam noEva, besazi ukuba baphulukene nobumsulwa babo, bachaphazela imeko yendalo yomntu ebakhokelela kokulungileyo, ephawula ububi nesono.
Ukufa sesinye seziphumo sokuba uMdali alumkise uAdam noEva, kwimeko yokuba batye kumthi wokwazi okulungileyo nokubi okanye bade baziwe njengomthi wokwazi okulungileyo nokubi.